🥇 Uhlelo lwesikole sezemidlalo
Isilinganiso: 4.9. Inani lezinhlangano: 115
Ividiyo yohlelo lwesikole sezemidlalo
Oda uhlelo lwesikole sezemidlalo
Ukusebenza nezinhlelo ezahlukahlukene, uhlala unethuba lokudideka, futhi ngenxa yalokho, umsebenzi wesikole sezemidlalo uphazamiseka kalula. Sonke sifuna uhlelo olulodwa lwesikole sezemidlalo, oluzoba nayo yonke imisebenzi ye-accounting yesikole sezemidlalo. I-USU-Soft wuhlelo lwesikole sezemidlalo, olwenzelwe ukusebenza ngemisebenzi eyahlukahlukene okufanele isetshenziswe emsebenzini waleso sikhungo. Ukuphathwa kwesikole sezemidlalo kungenziwa ngosizo lwamathuba amaningi nemisebenzi yohlelo lwe-accounting nokuphathwa, ukulawula isenzo ngasinye ngokwehlukile. Ukusebenziseka kalula kohlelo lwesikole sezemidlalo ku-interface elula, lapho uzosebenzisa khona kuphela amathebhu amakhulu ama-3: amamojula, izinkomba kanye nemibiko.
Ukuzenzakalela kwesikole sezemidlalo kuyisinyathelo esikhulu esizayo. Esikoleni sezemidlalo uhlukanisa izenzo zakho kuzo zombili ezijwayelekile nangesikhathi esisodwa, njengombiko wezezimali wanyanga zonke. Ukuphathwa kwesikole sezemidlalo kudinga ukunakwa. Lapho usugcwalise imininingwane oyidingayo, ugcwalisa kalula noma yimaphi amashejuli, amapulani, noma imibiko. Uhlelo lwe-accounting nokuphathwa lwesikole sezemidlalo luzenzakalelayo. Ngemuva kokukhiqiza i-database yolwazi kanye, uzothola kalula noma yiziphi izibalo, amapulani noma amashejuli okwenziwa ngohlelo lokulawula ezishintshayo ngomzuzwana! Ukulawulwa kwesikole sezemidlalo kuhlelwe kahle lapho uqala ukusebenzisa lolu hlelo lokulawulwa kwekhwalithi nokuthuthukiswa kwenhlangano yebhizinisi. Uhlelo lwesikole sezemidlalo luba umsizi omkhulu ezinqumweni nasezenzweni zakho! Akukho lutho oluyinkimbinkimbi ekuphathweni kwesikole sezemidlalo ngohlelo. Uhlelo lwe-USU-Soft lwe-accounting lusiza wena ukuba ubhekane nohlelo lwesikole sezemidlalo kalula, ngokushesha, kalula!
Futhi awusebenzisi uhlelo lwekhompyutha hhayi endaweni yangakini kuphela, kodwa futhi nangonethiwekhi. Lokhu kuyasiza kubo bobabili abaphathi nabasebenzi - imisebenzi yenethiwekhi yegatsha iyahlanganiswa, futhi uxhuma kudathabheyisi bese wenza lo msebenzi kusuka noma yikuphi emhlabeni. Wonke umuntu uyakwazi ukusebenza ohlelweni ngenxa yokuthi yonke imininingwane ekubonakalayo kohlelo icatshangelwa. Uhlelo lwesikole sezemidlalo lungaklanywa ngokucabanga kwakho komuntu siqu - kunezindikimba ezingaphezulu kwamashumi ayisihlanu zesitayela ezitholakalayo. Ukwenza ngcono isithombe senkampani kuhlelwe kalula uma uthatha isinqumo sokufaka lolu hlelo lokuphathwa kwezimali. Kuqinisekisa ukutholakala, ukunemba nokuphelela kwalo lonke ulwazi futhi kwenza kube lula ukulawula izinhlobo ezahlukene zokuqeqeshwa nokuzivocavoca endaweni yakho yokuzivocavoca. Imibiko yezimali ngawe yenkampani isiza ukuhlela imisebenzi yenhlangano futhi ikhuthaze abasebenzi bomnyango wezentengiso. I-automation isiza ukugwema amaphutha angenangqondo ahlobene nomthelela wesici somuntu futhi yandisa ukusebenza kahle nokusebenza kahle kwabaphathi. Ukwenza ukuhlela nokulawula enkampanini yakho, kubaluleke kakhulu ukusebenza nelogo. I-logo yenkampani yakho ingafakwa ewindini eliyinhloko lohlelo, futhi izoboniswa kuyo yonke imibiko nemibhalo eyenziwe futhi iphrintwe kusetshenziswa i-USU-Soft. Uhlelo lokusebenza lungeza i-logo nemininingwane yesikhungo sakho sokuqina kumbiko ngamunye, owakhiwe nguwe. Uhlelo lokuphatha lune-interface yamawindi amaningi futhi isebenziseka kalula ngemisebenzi.
Lapho usebenza ne-USU-Soft, ungashintsha phakathi kwamawindi ngamathebhu atholakala ezansi kwesikrini. Sinikeza izimfanelo ezinjengokwaziswa kanye nokusebenziseka kwezikhala zethu zokusebenza. Ungafihla noma yimaphi amakholomu etafuleni ngalinye ngokuchofoza okumbalwa ukwenza umsebenzi wakho ukhululeke futhi ulahle izikhala ongazisebenzisi. Uhlelo lokuzenzakalela lokuqapha abasebenzi kanye nempumelelo impumelelo luvumela umsebenzisi ukuthi aguqule kalula ukuhleleka kwamakholomu - lokhu kwenziwa ngokuhudula okujwayelekile bese uphonsa ngesikhombisi segundane. Uhlelo lokusebenza lungalungisa kalula ububanzi bamakholomu. Isoftware ingasetshenziselwa ukuthengisa - kumasethingi ungashintsha i-logo kuphela kepha negama, imininingwane kanye nemininingwane yokuxhumana. Ngayo ungonga isikhathi ekugcwaliseni amakhadi amaklayenti - mane ukopishe okufakiwe okuhluke kancane kuleyo okudingeka uyifake, shintsha izinkambu ezidingekayo bese uyalondoloza. Kumenyu enkulu, umsebenzisi uthola izigaba ezintathu eziyinhloko - Imibiko, amaModyuli, ama-Directory.
Izinkomba zigcwaliswa kanye kuphela, Imibiko isetshenziswa ngabaphathi (umphathi noma imenenja), futhi amaModyuli asetshenziselwa ukwenza umsebenzi wansuku zonke. Inani lezifundo ezakhiwe ohlelweni lilinganiselwe kuphela ngememori etholakalayo namakhono wesikhungo sakho sezemidlalo. Ukuzenzakalela kungakusasa! Futhi ukuze uncintisane ngokwedlulele futhi weqe zonke izimbangi, ibhizinisi lakho lizodinga uhlelo oluhle lokuphendula ngazo zonke izenzo ezenziwa enhlanganweni yakho. Sikukwazisa ngohlelo lwethu lwe-USU-Soft, olwamukelwa njengenye yezinhlelo ezinhle kakhulu ngokwamazinga omhlaba.
Ukuzwa injabulo nenjongo empilweni, umuntu kufanele enze izinto ezimenza akhululeke nezithulisa ingqondo yakhe. Lezi zinto zingahluka, kepha kukhona eyodwa, nokho, ebanzi futhi engashiwo nganoma yimuphi umuntu emhlabeni: izivivinyo zemidlalo. Kusenza sizizwe siphila futhi sikwazi ukulawula umzimba wethu. Njengoba kunamajimu amaningi namuhla, lesi sikole semidlalo sidinga okuthile okuzosizuzisa nakho konke okuhle. I-USU-Soft ingaba enye yazo, njengoba yizo zonke izici ezidingekayo kulokhu.